Qisooyinka Qoor Qoor qeybta 2-aad "Qoor Qoor Aabahiis oo Hooyadii Xaadsan Dabeyl u dilay Orgi ay u qashay Jabhadii reerkeeda" ?
Wednesday June 24, 2020 - 06:35:34 in Warar by Super Admin
Dagaalkii Saleebaan iyo Mareexaan 1986 ayaa Niman Reer Xersiya oo Jabhadda waxey Cadaado iyo Caabudwaaq dhexdeeda ugu tageen Axmed Qoor Qoor hooyadiis Xaadsan Ibrahim Cali Dabeyl . Oday Qoor Qoor waa ka maqnaa guriga, laakiin Hooyo Xaadsan Ibrahim D
Dagaalkii Saleebaan iyo Mareexaan 1986 ayaa Niman Reer Xersiya oo Jabhadda waxey Cadaado iyo Caabudwaaq dhexdeeda ugu tageen Axmed Qoor Qoor hooyadiis Xaadsan Ibrahim Cali Dabeyl . Oday Qoor Qoor waa ka maqnaa guriga, laakiin Hooyo Xaadsan Ibrahim Dabeyl raggii jabhadda ahaay ee Reer Xersi waxey u qashay Orgi ku jiray Arrigga reerka.
Oday Cabdi Kaariye Qoor Qoor ayaa galabtii dambe guriga yimid, wuxuu tirshay Arrigii, wuxuu ka waayay Orgagii kadibna UL DHAMASA AYUU MADAXA UGA DHIFTAY Hooyo Xaadsan Ibrahim Dabeeyl oo illaaheey deeqsinimo u dhaliyay ahna hooyo qiimo badan.
Reer Xersi iyo Reer Muse ayey ka dhex tafatay, xilligaas dagaal xun oo u dhaxeeya Mareexaan iyo Saleebaan ayaa jiray.
Allaha u naxariistee Saciid Gacamey ayaa xaliyay kiiskaas, maadama ay aheyd ceebtii ugu xumeeyd ee taariikhda qoys Habargidira laga maqlo.
Ninka Aabahiis Orgi loo qalay Jabhad reer Xersi oo dagaal kula jira Cadaw ay dowladii Afweyne hubeeyneysay [Mareexaan] u dilay Marwadii uu qabay. ka warama wiil uu dhalay.
Sinji waa ma guuraan, Nin Aabahiis uu Marwadii uu qabay Orgi ay walaalaheed Jabhadda u qashay ku dilay ka warama wiilka uu dhalay ?
La soco qeybta 3-aad berri. taxanaha qisooyinka Qoor Qoor.